Gịnị ka Baịbụl Kwuru Banyere Ọdachi Ndị na-Emere Onwe Ha?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kachin Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Luo Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Curaçao) Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Réunion Creole Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tongan Turkish Twi Ukrainian Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zapotec (Quiatoni) Zulu
Ọ bụghị Chineke ka ọdachi ndị na-emere onwe ha n’ụwa taa si n’aka, kama ọ na-eche banyere ndị ọdachi dakwasịrị. Ọdachi ndị na-emere onwe ha so ná nsogbu ndị Alaeze Chineke ga-ewepụrụ anyị. Ka ọ dịgodị, Chineke na-akasi ndị niile ọdachi ndị na-emere onwe ha dakwasịrị obi.​—2 Ndị Kọrịnt 1:3.
Gịnị mere anyị ji kweta na ọdachi ndị na-emere onwe ha abụghị ntaramahụhụ si n’aka Chineke?
Ọdachi ndị na-emere onwe ha hà so n’ihe ndị na-egosi na anyị bi n’oge ikpeazụ?
Olee otú Chineke si enyere ndị ọdachi ndị na-emere onwe ha dakwasịrị aka?
Ò nwere ihe ndị Baịbụl kwuru ga-enyere anyị aka ịkwadebe maka ọdachi ndị na-emere onwe ha?
Amaokwu Baịbụl ndị ga-akasi ndị ọdachi ndị na-emere onwe ha dakwasịrị obi
Ihe ndị Baịbụl kọrọ gosiri na otú ọdachi ndị na-emere onwe ha si eme dị iche na otú Chineke si eji ihe ndị o kere eke egosi ike ya.
Ọdachi ndị na-emere onwe ha na-egbu ma ndị ọma ma ndị ọjọọ. Ma na Baịbụl, n’ebe ndị a kọrọ otú Chineke si jiri ihe ndị o kere eke kpee ndị mmadụ ikpe, naanị ndị ajọ omume ka e gburu. Dị ka ihe atụ, n’oge ochie mgbe Chineke bibiri obodo Sọdọm na Gọmọra, o chebere nwoke ezi omume ahụ bụ́ Lọt na ụmụ ya nwaanyị abụọ. (Jenesis 19:​29, 30) Chineke hụrụ otú obi onye nke ọ bụla bi n’ebe ahụ dị ma bibie naanị ndị ọ ma na ha bụ ndị ajọ omume.​—Jenesis 18:​23-32; 1 Samuel 16:7.
Ọdachi ndị na-emere onwe ha anaghị ama ọkwa tupu ya emee, mgbe ụfọdụ o nweghị onye na-amadị mgbe ọ chọrọ ime. Ma, Chineke dọrọ ndị ajọ omume aka ná ntị tupu ya ejiri ihe ndị o kere eke bibie ha. Ndị rubere isi n’ịdọ aka ná ntị Chineke nwere ohere ịgbanahụ ọdachi ahụ.​—Jenesis 7:​1-5; Matiu 24:​38, 39.
Mgbe ụfọdụ, ụmụ mmadụ na-eso akpata ọdachi ndị na-emere onwe ha. Olee otú ha si eme ya? Ha na-emebi gburugburu ebe ndị mmadụ bi, na-ewu ụlọ n’ebe a na-enwekarị ala ọma jijiji, idei mmiri na oké ifufe. (Mkpughe 11:18) Ọ bụghị Chineke ka e kwesịrị ịta ụta mgbe ihe ndị a kpataara ndị mmadụ nsogbu.​—Ilu 19:3.
Ee, Baịbụl buru amụma na a ga-enwe ọdachi ndị na-emere onwe ha n’oge “ọgwụgwụ usoro ihe a,” ma ọ bụ “n’oge ikpeazụ.” (Matiu 24:32; 2 Timoti 3:1) Dị ka ihe atụ, Jizọs kwuru gbasara oge anyị a, sị: “A ga-enwekwa ụkọ nri na ala ọma jijiji n’ebe dị iche iche.” (Matiu 24:7) N’oge na-adịghị anya, Chineke ga-ewepụ ihe niile na-akpata nsogbu na nhụjuanya n’ụwa a, ọdachi ndị na-emere onwe ha sokwa.​—Mkpughe 21:​3, 4.
Chineke na-eji Okwu ya bụ́ Baịbụl akasi ha obi. Baịbụl mesiri anyị obi ike na Chineke na-eche banyere anyị nakwa na ọ na-ewute ya ma anyị na-ata ahụhụ. (Aịzaya 63:9; 1 Pita 5:​6, 7) Baịbụl mekwara ka anyị mata na Chineke kwere nkwa na oge na-abịa mgbe ọdachi ndị na-emere onwe ha na-agaghịzi adị.​—Gụọ isiokwu bụ́ “ Amaokwu Baịbụl ndị ga-akasi ndị ọdachi dakwasịrị obi.”
Chineke na-esi n’aka ndị na-efe ya akasi ndị ọdachi dakwasịrị obi. Chineke na-eji ndị na-efe ya nọ n’ụwa enyere ndị ọdachi dakwasịrị aka, otú ahụ Jizọs si nyere ndị mmadụ aka mgbe ọ nọ n’ụwa. E buru n’amụma na Jizọs ga-akasị “ndị e tiwara obi” obi nakwa na ọ ga-akasi “ndị niile na-eru uju” obi. (Aịzaya 61:​1, 2) Ndị na-efe Chineke taa na-agbalịkwa ime otú ahụ.​—Jọn 13:15.
Chineke na-ejikwa ndị na-efe ya na-agbatara ndị ọdachi dakwasịrị ọsọ enyemaka.​—Ọrụ Ndịozi 11:​28-30; Ndị Galeshia 6:10
Ebe Ndịàmà Jehova na-enyere ndị ajọ ifufe mebiri ihe ha aka na Pueto Riko
Ee. Ọ bụ eziokwu na Baịbụl abụghị akwụkwọ na-enye ntụziaka otú a ga-esi akwadebe maka ọdachi, o kwuru ihe ndị nwere ike inyere mmadụ aka. Dị ka ihe atụ:
Kwadebe akwadebe tupu ọdachi emee. Baịbụl kwuru na “onye maara ihe bụ onye hụrụ ọdachi gaa zoo.” (Ilu 22:3) Ọ dị mma ka anyị kwadebe ihe ụfọdụ tupu ọdachi emee. Ihe ndị so n’ihe ndị anyị ga-akwadebe bụ akpa anyị tinyere ihe ndị dị mkpa anyị nwere ike iji gbapụ ozugbo ọdachi mere. Ihe ọzọkwa bụ anyị na ndị ezinụlọ anyị ikwu ebe anyị niile ga-agbaga ma ọ bụrụ na e nwee ọdachi merenụ.
Ekwela ka ihe i nwere dị gị mkpa karịa ndụ gị. Baịbụl kwuru, sị: “Ọ dịghị ihe anyị ji bịa n’ụwa, ọ dịghịkwa ihe anyị pụrụ iwere si n’ime ya pụọ.” (1 Timoti 6:​7, 8) Anyị kwesịrị ịdị njikere ịhapụ ụlọ anyị nakwa ihe ndị anyị nwere mgbe ọdachi mere. Ọ dị mma ka anyị cheta na ndụ karịrị akụnụba.​—Matiu 6:25.
Amaokwu Baịbụl ndị ga-akasi ndị ọdachi na-emere onwe ha dakwasịrị obi
Jenesis 18:25: ‘Tụfịakwa! Chineke agaghị eme otú a, igbukọta onye ezi omume na onye ajọ omume. Ọ̀ bụ na Onyeikpe nke ụwa dum agaghị eme ihe ziri ezi?’
Ihe ọ pụtara: Chineke na-eme ihe dị mma mgbe niile; anyị ekwesịghị ịta Chineke ụta ma ndị ezigbo mmadụ nwụọ n’ihi ọdachi ndị na-emere onwe ha.
Abụ Ọma 46:​1, 2: “Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, onye dị njikere inyere anyị aka n’oge nsogbu. Ọ bụ ya mere na anyị agaghị atụ egwu, ọ bụrụgodị na ụwa agbanwee.”
Ihe ọ pụtara: N’agbanyeghị ihe ọ bụla ga-emenụ, Chineke bụ Onye anyị nwere ike ịtụkwasi obi na ọ ga-enyere anyị aka.
Aịzaya 63:9: “N’oge niile ha nọ na-ata ahụhụ, ọ nọ na-ewute ya.”
Ihe ọ pụtara: Chineke nwere ọmịiko. Ọ na-ewute ya ma anyị na-ata ahụhụ.
Jọn 5:​28, 29: “Oge awa na-abịa mgbe ndị niile nọ n’ili ncheta ga-anụ olu [Jizọs] wee pụta.”
Ihe ọ pụtara: Anyị nwere olileanya na anyị ga-ahụ ndị anyị hụrụ n’anya nwụrụ anwụ ọzọ, n’ihi na Chineke ga-enye Jizọs ike ịkpọlite ha n’ọnwụ.
1 Pita 5:​6, 7: “Ya mere, wedanụ onwe unu ala n’okpuru aka dị ike nke Chineke . . . na-atụkwasịnụ ya nchegbu unu niile, n’ihi na ihe banyere unu na-emetụ ya n’obi.”
Ihe ọ pụtara: Ihe banyere anyị na-emetụ Chineke n’obi, ọ chọrọ ka anyi na-agwa ya ihe ndị na-echegbu anyị.
Ihe ọ pụtara: Chineke ga-ewepụ ihe niile na-akpata ahụhụ, ma ọdachi ndị na-emere onwe ha.
Baịbụl Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara Otú Ị Ga-esi Edi Nsogbu Udo na Obi ụtọ
Olee otú anyị ga-esi mara na Chineke ga-eme ka ahụhụ na mmegbu niile kwụsị n’oge na-adịghị anya?
Mgbe A Na-agaghị Enwekwa Ọdachi
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị ka Baịbụl Kwuru Banyere Ọdachi Ndị na-Emere Onwe Ha?
ijwbq isiokwu 157
Ọdachi Mee Olee Ihe Ndị Nwere Ike Ịzọ Anyị Ndụ?